Siqala uhlelo lokuhlelela iminyaka emihlanu ezayo | News24
Siqala uhlelo lokuhlelela iminyaka emihlanu ezayo
EMVA kokufungiswa komkhandlu wethu kube sekuguqa iminyaka emihlanu yokuhlela kukaMasipala wethu sekuqala kabusha ukuhlelela iminyaka emihlanu ezayo ka 2017-2021.
Kuningi esikufundile eminyakeni emihlanu edlule okuyikona okuzosisiza kakhulu ukuqhubekela phambili. Njengoba sesiqhubekela phambili siqhubeka sinokwazi lapho sesifinyelele khona nalapho singakafinyeleli khona.
Ngokubambisana namaKhansela, Amakhosi, abasebenzi bakaMasipala, umphakathi, izinhlangano ezizimele nawowonke umuntu sizohlela ukuthi kusukela manje kuya phambili yini ekumele siyenze ukwenza ngcono izimpilo zabantu. Isithombe esinaso manje somsebenzi owenziwe sisithola emibikweni edlule.
Kanti futhi isithombe sokumele kwenziwe sisithola kuzona zonke izimbizo nemihlangano yemiphakathi ekade siba nayo kabili ngonyaka ezingeni likaMasipala kanye nasezingeni lama khansela amawadi.
Ngiyethemba ukuthi lesisithombe esinaso sicace bha ukuthi sihlangabezana nazo zonke izinkinga esibhekene nazo.
Zikhona izinhlelo eziqhubekayo ezifaka phakathi ukwakhiwa kwamahhovisi amasha kaMasipala wethu, ukuqhubeka nokwakhiwa kwe-Indoor Sports Centre, ukuqhubeka nokwakhiwa kweNtelezi Msani Heritage Centre ikakhulukazi ukwakhiwa kwe library nokuhlonzwa kwezinye izindawo zokwakha enye i-Indoor Sports Centre. Kumanje sithakasela ukwakhiwa kwe Mall.
Kanti sibheke ukubona ukwakhiwa kwamanye ama-mall endaweni yasoPhepheni naseJunction eSt Faiths.
Ukuthuthuka komnotho wethu okona esikubeke eqhulwini njengoba sinxenxa iminyango ehlukahlukene keHulumeni ikakhulukazi obhekelene nokudoba ukuthi wonke umuntu odobayo akwenze loko ngokusemthethweni futhi akwazi nokuziphiliza ngako. UMnyango wezeMfundo ephakeme ikakhulukazi eSayidi Tvet siqhubeka nokusebenzisana nawo ukuqeqesha nokunika amakhono abahlali baseMzumbe ezintweni ezihlukahlukene.
Ngiyanxusa ukuthi siqinisekise ukuthi asidlali ngamathuba.
Uma sesiqedile ngeziphakamiso sizobuyela emphakathini ukuzoxoxisana nawe ukuthi izona ngempela izinto ababeziphakamisile ezimbizweni ukuze sikwazi nokuhlela kahle izimali zokwenza leyo misebenzi.